कमाइ भन्दा बढी खर्च भएर निराश हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी तरिका - Kohalpur Trends
एजेन्सी । अहिले मानिसहरुको मुख्य समस्या भनेको रोज गारी,कमाई हो । मानिसलाई कमाइले जति सताइरहेको छ त्योभन्दा बढि उनीहरुले त्यसलाई बचाउन नसकेर समस्या मा परेका छन्।त्यसैले कतिपय मान्छेले भन्ने गर्छन ‘मेरो हातमा त पैसा नै बच्दैन के गर्ने होला, यदि तपाई पनि पैसा बचाउन नसकेर हैरान हुनुहुन्छ भने अपनाउनुहोस् यि उपाय :
तपाईले पैसा बचाउन चाहानुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला जागर चलाएर हरेक दिन गर्ने खर्चलाई टिप्ने बानि बसाल्नु होस् । ‘एक हजारको नोट जब साटिन्छ, त्यो कहाँ जान्छ थाहा नै हुँदैन ।’ मानिसहरुले धेरै गर्ने गुनासोमा यो पनि पर्छ । मानिसहरुको हातमा पैसा भएपछि त्यो कतिबेला खर्च भयो भन्ने नै मानिसले थाहा पाउँदैनन्। दुध, चिया, पत्रिका, तरकारी, आदिमा दैनिक रुपमा खर्चका शिर्षकहरु हुन् । यस्ता सानासाना आवश्यकतामा खर्च भइरहेपनि मानिसहरुलाई यसको बारेमा थाहा भइरहेको हुँदैन ।
तपाईले मासिक रुपमा गर्ने खर्चको पहिले नै योजना बना उनु आवश्यक छ । यदि पैसा बचाउने हो भने, यो महिना कति खर्च गर्ने भन्ने पहिले नै योजना बनाउनु पर्छ । यसले तपाईको आवश्यकता के र त्यसमा पनि प्राथमिकीकरण गर्न सहयोग गर्छ । यसरी महिनामा गर्ने खर्चलाई पहिले नै योजना बनाएको हुनाले विशेष परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा त्यो भन्दा धेरै खर्च हुने छैन ।
तपाईसँग हरेक महिनाको आम्दानीको विवरण आएपछि त्यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि योजना बनाउनु पर्छ । मानिसका आवश्यकता धेरै हुन्छन् तर आ म्दानी सिमित हुने भएकोले त्यसलाई योजनाबद्ध रुपमा खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खर्चको विषयमा योजना बना उँदै सँगसँगै बचतको विषयमा पनि योजना बनाउनु पर्छ । हरेक महिना हुने आम्दानीको २० देखि ३० प्रतिशत सम्म बचत गर्ने बानी गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरु बताउछन् ।
The put up कमाइ भन्दा बढी खर्च भएर निराश हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी तरिका appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: पाँचसय वर्ष पुरानो गणे,शको मु.र्ति फेला, बेवास्ता नगर्नुहोला? पढेर ॐ लेखि शे’यर गरौं
Next Next post: पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि साइकल यात्रा